Maxkamada sare ee Mareykanka oo ogolaatay go’aan uu hore usoo saaray madaxweyne Trump – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Maxkamada sare ee Mareykanka oo ogolaatay go’aan uu hore usoo saaray madaxweyne Trump
Maxkamada sare ee dalka Mareykanka ayaa ogolaatay go’aankii uu madaxweyne Donald Trump hore kaga mamnuucay in muddo 90 maalmood ah ay dalkaasi soo geli karaan 6 dal oo Islaam ah oo ay ku jirto dalka Soomaaliya.
Go’aanka maxkamada sare ayaanan marnaba saameyn doonin dadka haysta ogolaashiyaha Viisooyinka dal ku galka ah ee doonaya inay la midoobaan qoysaskooda ku nool dalka Mareykanka.
Maxkamada sare ayaa sheegtay inay dib u eegis ku sameeyn doonto kiiskaas bisha October ee sanadkaan 2017-ka.
Dhinaca kale, wareegto uu hore usoo saaray madaxweyne Trump ayaa tilmaameysay in muddo 90 cisho ah aysan dalka Mareykanka soo gali karin muwaadiniinta u kala dhashay dalalka Soomaaliya, Sudan, Iiran, Libya iyo Yemen.
Sidoo kale, go’aanka maxkamadda sare ayaa ka dhigan in si KMG loo hakin doonno barnaamijka qaabilaada qaxootiga iyo qoysaska looga soo dacwoodo Mareykanka, balse arrinkaasi aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin dadkii hore Viisooyinka u helay.
Bisha October ee sanadkaan ayaa la filayaa in maxkamada sare ee dalka Mareykanka ay go’aan kama dambeys ah kasoo saarto arrinta xayiraada uu madaxweyne Donald Trump kusoo rogay 6 dal oo Islaam ah oo ay ku jirto dalka Soomaaliya.
Donald Trump ayaa soo dhaweeyay go’aanka maxkamada sare ee dalka Mareykanka.